.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် - ယိမ်းလိုက် Album
အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် - ယိမ်းလိုက် Album
ကျွန်တော် မနေ့ညတုန်းက သူငယ်ချင်း မိုးကဗျာဆိုဒ်ကို သွားလည်တော့ အဲဒီမှာ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်ရဲ့ သမီးရဲ့မေမေဆိုတဲ့
Flash Song လေး တင်ထားတာကို နားထောင်မိပြီး တော်တော်လေးကြိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းပြီးတော့ပါ သိမ်းထားဖြစ်သွားတယ်။
သူ့သီချင်းလေးတွေ လိုက်ရှာကြည့်တော့ ဒီ ယိမ်းလိုက်ဆိုတဲ့ Album လေးတွေ့တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း နားထောင်လို့
ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အားလုံးပေါင်း ၁၄ ပုဒ် ရှိပါတယ်။သီချင်းတွေကို ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင် သီချင်းလင့်အပေါ်ကို
Right Click လုပ်ပြီး Save Link As.. ကို နှိပ်ပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
1 ဒဏ်ရာများနဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.60 MB
2 ဘယ်လိုအချစ်မျိုးနဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.70 MB
3 ပြန်လှည့်မကြည့်ဘူး အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 2.30 MB
4 ယိမ်းလိုက် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.40 MB
5 လွမ်းနေလို့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.80 MB
6 အဆုံးမဲ့အိပ်မက် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.90 MB
7 ရာဇ၀င်တွင်မယ့်ချစ်ခြင်း အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ၊ ကောင်းကောင်း Click Here !! 1.40 MB
8 သက်ဆုံးတိုင် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.60 MB
9 မင်းနဲ့အတူ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ၊ မြင့်မြတ် Click Here !! 1.70 MB
10 တဇွတ်ထိုး အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.40 MB
11 အဖြည့်ခံ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.70 MB
12 ကျိန်လိုက်ဦး …. လိမ်လိုက်ဦး အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.40 MB
13 သမီးရဲ့မေမေ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 1.60 MB
14 အပြာရောင်တေးသံ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here !! 2.20 MB
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာတင်ထားတဲ့ Mp3 သီချင်းတွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ လုံးဝ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Thurainlin [ http://itwebcrazyboy.blogspot.com ]
Posted by Thurainlin at 10:06